cadjpy oovimba-Funda ukuRhweba
I-CAD / JPY iqokelela amandla eBullish!
I-CAD / JPY yehle kancinci kwixesha elifutshane ukuzama ukubamba amandla ngakumbi ngaphambi kokuphinda inyukele phezulu. Ukuqhawuka komqolo kusondele njengoko i-JP226 (Nikkei) inokuphinda ikhule kwakhona.
Ukwehla kwethutyana kwakulindelwe emva kwereyali emangalisayo. Inokunyuka ixesha elide ihleli ngaphezulu kwamanqanaba enkxaso kwangoko. ICanada iza kukhupha i-GDP yayo ngoLwesithathu. Esi siganeko sinokuzisa isenzo ngakumbi kwesi sibini.
CAD / JPY H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-CAD / JPY ithengisa ngoku ebomvu okwangoku kwaye inokuphinda iphindaphinde umgca we-pitchfork's median line (ML). Uxinzelelo lokuthengisa luhlala luphezulu okoko luhlala ngaphantsi komgca ophezulu we-median (uml) wefolokhwe yehla.
Ukwenza uqhawulo olusebenzayo ngaphezulu komgca ophezulu we-median (uml) kunokubonakalisa uqhubekeko oluphezulu. I-89.825 kunye nomgca ophakathi (ML) ubonwa njengamanqanaba enkxaso abalulekileyo. Ukulahla kunye nokuzinzisa phantsi kwala manqanaba kunokungasebenzi kwimeko ebalaseleyo.
Ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwenqanaba le-90.407 kunokwenza ukuba intshukumo ebalulekileyo kunye neyomeleleyo yonyuselo.